Sida loogu helo astaamo barnaamij animated ah taleefankaaga Android | Androidsis
Marka waxaad kuheli kartaa astaamo codsi firfircoon taleefankaaga Android barnaamijkan
Dukaanka Google Play waxaa ku jira wax badan oo furayaal ah (launchers) oo leh astaamo u gaar ah oo badan. Kuwan oo kale, waxaan ku beddeli karnaa muuqaalka isdhexgalka taleefannadeena kun siyaabood, sidoo kale waxaan ku darnaa animations-ka astaamaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Qaar badan oo ka mid ah furayaasha aan ka heli karno Android waa xoogaa dagaal ah, wax aan had iyo jeer u fiicnayn qayb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala, maaddaama qof walba uusan rabin is-dhexgal gebi ahaanba ka duwan kii horeyba ula yimid taleefanka mahadnaqa lakabka asalka ah habeynta ka mid ah Loogu talagalay adeegsadayaashan, iyo gaar ahaan kuwa doonaya noolee sumadaha barnaamijka, waxaa jira barnaamijka aan ka hadlayno xiga.
Osmino Launcher waa barnaamijka aad ku samayn karto astaamaha barnaamijku inay leeyihiin animation
In kasta oo ku jira Google Play Store soo-saaraha loo magacaabay sida Live Icon Launcher ee Android, asal ahaan waxaa loo yaqaanaa Osmino Launcher. Codsigan waa bilaash, wuxuu leeyahay culeys qiyaastii ah 12 MB oo wuxuu leeyahay wax ka badan hal milyan oo soo degso dukaan ah, oo leh qiimeyn 4.5 xiddigood ku saleysan in ka badan fikradaha 20.000.
- Christian Ruiz (@Rumu_Chris) January 27, 2021
Inta badan codsiyada waxay lahaan doonaan animations markii aad rakibto qalabkan. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa Google (Gmail, Duo, Chrome iyo Youtube, iyo kuwo kale), kuwa u dhashay taleefannada casriga ah iyo kuwa kale sida Instagram, WhatsApp, Facebook iyo xitaa ciyaaraha sida Brawl Stars. Waxaa jira qaar kale oo aan taageerin animations, waxaa xusid mudan.
Waxaa jira ikhtiyaar noo oggolaanaya inaanu jaangooyono waqtiga astaamaha dalabka si loo seexdo, ama ka dib 10 daqiiqo ama 3 saacadood ka dib. Waxa kale oo jira dukaan ku yaal gudaha barnaamijka oo noo oggolaanaya inaan ku darno saameyn iyo animations cusub. [Baro: 2 Launchers Android leh qaab minimalist badda iftiinka iyo wax soo saar leh]
Dabcan, maskaxda ku hay in animations-ka la hawlgeliyo ay saameyn ku yeelan karto nolosha batteriga iyo waxqabadka moobiilka, maadaama barnaamijku uu cuni doono RAM iyo CPU inta uu shaqeynayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Marka waxaad kuheli kartaa astaamo codsi firfircoon taleefankaaga Android barnaamijkan
Hoopa City 2 waa "Sim City" oo loo fududeeyay kuwa yaryar ee guriga ku jira
Vivo X50 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Funtouch OS 11 ee Android 11